गेमिङ motherboards सधैं एक सुविधाजनक कार्यक्षमता संग आधारभूत घटक को प्रवेग र dostoyal र सम्पूर्ण प्रणाली को स्थिरता लागि मात्र होइन सम्भावित रुचि राख्ने क्षमता खरीदारों को ध्यान आकर्षित गरेका छन्। तर यस्तो समाधान को मूल्य एक साधारण खरीदार लागि महंगा छन्। स्वाभाविक, बजार एक समझौता माग, र यो फेला परेन। आफ्नो नाम ASUS Sabertooth Z77। खेलाडीहरूको लागि motherboard, जो को मूल्य 10 000 rubles को मनोवैज्ञानिक बाधा भन्दा बढी छैन। यस लेखमा पाठक यसको फाइदा र बेफाइदा सबै, साथै पूर्ण विवरण, सुविधा र मालिकको समीक्षा हेर्न पाता यो अद्भुत उत्पादन थाह छ।
प्रयोगकर्ता लामो ASUS ROG देखि कुलीन उत्पादनहरु लोगो (खेलाडीहरूले गणतन्त्र) अन्तर्गत अवस्थित भन्ने तथ्यलाई गर्न accustomed गरिएको छ, यति धेरै क्षमता खरीदारों पक्कै धारणा देखा सक्ने ASUS Sabertooth Z77 - किनभने यो श्रृंखला को एक विशेष Motherboard। वास्तवमा, स्थिति केहि फरक छ।
ROG श्रृंखला विश्व बजार मा सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरु को सबै भन्दा राम्रो उत्पादन रूपमा अवस्थित छ। त्यो हो, उच्च वर्गीकरण बस केहि हुन सक्दैन। तर उच्च-अन्त खण्ड र कम अन्त बीच, त्यहाँ धेरै पत्रहरु, यो किफायती धेरै उपभोक्ताहरु मूल्य संग एक सभ्य गुणस्तर उत्पादनहरु छ जो छन्।
पहिले, हामी लोगो डिलक्स संग उत्पादनहरु (समान अंकन WS वा गोल्ड) बारे कुरा गर्दै छन्। Motherboards यो वर्गीकरण अत्यधिक कम्प्युटर प्रविधिको बुझ्न सबै प्रयोगकर्ताहरू सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को, सिढी घट्दो मा, स्थित TUF वर्ग (परम बल)। उसलाई छ र motherboards Sabertooth Motherboard को एक श्रृंखला को भाग हो।
आफ्नो समीक्षा मा सैन्य विषय खेल को प्रशंसक भएको Motherboard को प्याकेज, यसको डिजाइन र भित्री डिजाइन को XXI सताब्दी को सुरुतिर मा लोकप्रिय थियो जो इन्टरफेस एक रोचक खेल, को कडा reminiscent छ भन्छन्। जाहिर छ, कम्पनी को डिजाइनर छैन द्वितीय विश्व युद्ध को लडाई मा सहभागी गर्न युवा गर्न averse थियो।
डिजाइन को लागि, यो एकदम सूचनात्मक छ र विस्तृत वर्णन सुविधाहरू र प्रविधिहरू को सबै भन्दा। यो ASUS Sabertooth Z77 प्रयोगकर्ता अन्वेषण गर्न (उपलब्ध छैन मुख्य प्रदर्शन जानकारी) बक्समा खोल्न आवश्यक छ कि मात्र वास्तवमा confuses।
प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया आधारित सबैलाई परिवहन समयमा क्षति देखि स्वामित्व Motherboard को सुरक्षा गरिन्थ्यो। आधारभूत उपकरण मात्र होइन यसको आफ्नै गत्ता कन्टेनर छ, तर पनि निर्माता भुक्तानी सबै शक्ति तत्व रक्षा गर्न व्यवस्थित जो एक प्लास्टिक अस्तर, को रूप मा थप सुरक्षा संग सुसज्जित।
युवा प्रविधिको सेट
यो निर्माता एक सभ्य बन्डल baseplate ASUS Sabertooth Z77, मूल्य जो 10 हजार rubles छ प्रदान गरेको छ कि आश्चर्य छैन। त्यसको विपरीत, खरीदार केही घटक वा बोल्ट बढते को अभाव को तथ्यलाई ध्यान आएको छ।
मानक निर्देशन साथै यस SATA केबल बक्स खरीदार मा सिस्टम एकाइ को पछाडि प्यानल र प्लग पाउनुहुनेछ: को विस्तार स्लट, एडेप्टर को सेट लागि प्लग को एक सेट, SLI-पुल, दुई साना प्रशंसक (ठंडा नियन्त्रक) (इन्टरफेस र बिजुली आपूर्ति लागि), स्क्रू को एक विशाल सेट र फास्टनरों को सबै प्रकार को लागि बोल्ट।
यो बेफाइदा एक पुल CrossFire को कमी हो - यो यो AMD उत्पादनहरु अक्सर निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ छ भन्ने तथ्यलाई दिइएको धेरै अनौठो छ, एक खेल मंच, धेरै ग्राफिक्स कार्ड आधारमा। पनि खरीदारों SATA-केबल (कुल4एकाइहरु) को सानो रकम भ्रममा।
डिजाइन र Ergonomics
हो, बक्स Motherboard ASUS को जफती मा Sabertooth Z77 आनन्द यसको उपस्थिति संग हरेक प्रयोगकर्ता कारण सक्षम छ। हामी ट्रान्जिट समयमा क्षति देखि बोर्ड रक्षा गर्न कारखाना मा निर्माता स्थापित जो एक प्लास्टिक समाप्त बारेमा कुरा गर्दै छन्। तथापि, यस्तो असम्भव मा assembling उपकरण सिस्टम एकाइ, त्यसैले सुन्दर उपस्थिति मा इन्कार हुनेछ।
यहाँ पनि प्रयोगकर्ता गर्न जागरूकता आउने उहाँको अघि सामान्य Motherboard, जो छैन धेरै नेत्रहीन कम्प्युटर बजार मा प्रस्तुत उत्पादन को 99% देखि विभिन्न। पहिलो स्लट PCIex16 सम्झन्छन् माथिल्लो वर्ग गर्न उपकरण आपूर्ति कि कायम छ। र हामी सिस्टम बोर्ड र Ergonomics को तत्व को प्रयोग कुरा भने, त्यहाँ बस संभावित खरीदारों प्रभावित केही छ। तरिका यो कुरूप र असहज देखिन्छ। जाहिर छ, कि निर्माता प्लास्टिक सजावट अन्तर्गत बोर्ड को तत्व लुकाउन निर्णय किन हो।
सारा सिस्टम को हृदय
अवलोकन Motherboard ASUS Sabertooth Z77 प्रोसेसर सकेट सुरु गर्न राम्रो छ। हो, यो एक धातु थाली, तर सबै सुविधाहरु प्रणाली एकाइ को रियर संलग्न छ जो, र यो अन्त मा गरेर सकेट एक लाभ छ। तिनीहरूले जो वरिपरि ठाउँ cluttering, मुख्यतया प्रवेग मा केंद्रित को खेल उपकरण निर्माता, को के लाग्छ, रोचक छ सकेट 1155 इलेक्ट्रोलिटिक capacitors दसौं।
एक शक्तिशाली ठंडा सिस्टम गाह्रो हुनेछ स्थापना गर्न र सामान्य मा एक निष्क्रिय रेडियेटर सधैंभरि भूल गर्न सकिन्छ। धेरै अनौठो र अव्यावहारिक दृष्टिकोण मिडिया मा आफ्नो समीक्षा अनुसार, सबै प्रयोगकर्ताहरू द्वारा नकारात्मक अभिवादन थियो। यो अवस्था को उपज, पाठ्यक्रम, छ, र यो प्रयोगकर्ता (कूलर बदल हुनेछ) धातु मशीनिंग को विज्ञान बुझ्न हुनेछ भन्ने छ। अर्कोतर्फ, यो मंच को क्रिस्टल एकदम आर्थिक छ र प्रयोगकर्ताले सबै ठंडा सिस्टम को विशाल आकार प्राप्त गर्न संभावना छ।
स्मृति सबै छ
हास्यास्पद चार DDR3 स्लट वरिपरि, त्यसको विपरीत, प्रयोगकर्ता capacitors को क्लस्टर फेला गर्दैन। तरिका पनि अनौठो छ कि स्मृति मोड्युल अक्सर ब्याट्री धेरै माथि propped छन् किनभने, यो हेर्नका लागि। को mainboard ASUS Sabertooth Z77 समर्थन DDR3 1.5 वी4स्लट मा दोहोरो मोडमा सञ्चालन र 32 गिगाबाइट गर्न मंच को कुल मात्रा अप कायम गर्न सक्ने प्रणाली बोर्ड स्मृति लागि प्रदान गरिएको छ मोड्युलहरू। लगभग एक स्लट अप 8 जीबी गर्न स्मृति मोड्युल मात्र काम गर्न सक्षम छ।
1066-1866 मेगाहर्ट्ज - को टायर नै आरोप DDR3 आवृत्ति सन्दर्भमा, त्यसपछि त्यहाँ सीमा छ। फेरि, निर्माता प्रयोगकर्ता जवाफ सक्षम हुन असम्भाव्य छ जो धेरै प्रश्नहरू छन्। उदाहरणका लागि, यो मात्रा मा स्पष्ट प्रतिबन्ध छैन। 32 गिगाबाइट पछि धेरै खेल मञ्चहरूमा लागि आदर्श भएका छन्, क्रमशः, चाँडै अर्को खेलौना को रिलीज पछि, मंच प्रदर्शन पर्याप्त नहुन सक्छ। र कसरी सुपरफास्ट स्मृति समर्थन DDR3 2133-2400 मेगाहर्ट्ज - र बस आवृत्ति संग छैन स्पष्ट छ?
तर ऊर्जा आपूर्ति गर्न Motherboard ASUS Sabertooth Z77 भविष्य मालिकसँग दोष पत्ता लगाउन असम्भाव्य छ। सर्वेक्षण, विशेषज्ञहरु द्वारा आयोजित, प्लेटफर्म स्थिर छ र अधिक भार र तात्दै डराएका गर्छ कि प्रयोगकर्ता देखाउँछ। मञ्चमा कुनै पनि विस्तार कार्ड आफ्नै शक्ति आपूर्ति प्रणाली (निर्माता बोर्ड मा 12 चरणहरु स्थापित) छ। निस्सन्देह, कुनै पनि तत्व वा आपतकालीन अन्य स्थापित घटक मा विफलता को मामला मा प्रभावित छैन।
पनि उल्लेखनीय Motherboard को ठंडा सिस्टम छ। सबै असर तत्व दुई अलग एकाइहरु भेला, र तिनीहरूलाई माथि तामाको पाइप द्वारा परस्पर जुन निष्क्रिय radiators, माउन्ट। दक्षिण पुल दह्रोसित गर्मी डुब्नु तामा बनेको, प्रयोगकर्ता स्थापना र प्रशंसक (वर्तमान समावेश गरिएको छ) गर्न सक्छन् जो मा छ।
को Motherboard ASUS Sabertooth Z77 ध्यान आकर्षित गर्ने खरीदारों सबैभन्दा रुचि, को त्यो खेल क्षमता। तीन ग्राफिक्स कार्ड गर्न सिस्टम सेट अप गर्न ओभरक्लकिङ क्षमताहरु गर्न साथै, यो उत्पादन अनुमति दिन्छ किनभने खेलाडीहरूलाई। को स्लट लागि जाँदा PCIEx16, यो आवश्यक पनि सही ढंगले Motherboard मा तीन इन्टरफेस राख्न व्यवस्थित गर्ने निर्माता, गर्न आदर भुक्तानी गर्न छ। प्रयोगकर्ताले शक्तिशाली गेमिङ ग्राफिक्स कार्ड प्रत्येक अन्य ठंडा सिस्टम हस्तक्षेप गर्नेछ भन्ने चिन्ता गर्न आवश्यक छैन।
अर्कोतर्फ, म एकदम स्थापना PCIex1 स्लट बुझ्न छैन। आफ्नो स्थान बस गेमिङ भिडियो कार्ड को ठंडा प्रणाली अन्तर्गत छ। सायद निर्माता ठाउँ कब्जा गर्न केही हुनुपर्छ, तर त्यहाँ लोकप्रिय बंदरगाहों बस ठाउँ छैन। वैकल्पिक रूपमा, बंदरगाहों तलतिर 90 डिग्री मार्फत घुमाइयो गर्न सकिन्छ र विशेष शुल्क extenders प्रदान गर्न।
लाभ तीन दुई जो RAID समर्थन SATA-नियन्त्रक, उपस्थिति समावेश गर्नुहोस्। यो डिस्क सहायक एकदम प्लेटफर्म को प्रदर्शन सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। एक निर्मित भिडियो उत्पादन खुसी (एकीकृत ग्राफिक्स प्रोसेसर निर्भर)। यहाँ लाभ, पाठ्यक्रम, एक असफल प्रयोगकर्ता ओभरक्लकिङ पछि कम्प्युटर चलाउन छ।
मा मंच प्रदर्शन को सुधार छोएर, यो Motherboard ASUS Sabertooth Z77 BIOS सँग लोड र अनुमति दिन्छ कि एक 1155 विशेष खोल संग सुसज्जित छ टिप्पण लायक छ सञ्चालन प्रणाली बुट गर्न सिस्टम ठीक-ट्युनिङ। उपयोगिता धेरै सहज छ र ठूलो कार्यक्षमता छ। सबै घटक को आवृत्तियों र पोषण एक फैलाने रूपमा अलग स्थापित गर्न सकिन्छ।
उत्साही र "स्यान्डबक्स" जस्तै। को खोल को संरचना आधारित भर्चुअल वातावरण मालिक कमीकमजोरी पहिचान गरेर परीक्षण मंच overclocked प्रदर्शन र स्थिरता पूरा गर्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ एउटा विफलता थियो र पनि भने, तपाईं सधैं पूर्वनिर्धारित समस्या BIOS रिसेट, बोर्ड यो लागि विशेष बटन छ किनभने समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।
एक सभ्य कार्यक्षमता, उत्कृष्ट उपकरण, स्थिर संचालन र किफायती मूल्य निश्चित धेरै प्रयोगकर्ताहरू आकर्षित हुनेछ: फलस्वरूप, ASUS Sabertooth Z77 उत्पादन धेरै आकर्षक साबित भएको छ। क्रेता मात्र जसको लागि यो यस्तो Motherboard आवश्यक उद्देश्य अक्सर धेरै मालिक हात मा भएको हुनाले एउटा मात्र भिडियो कार्ड उहाँले यस्तो अद्भुत र बहुमुखी मञ्च हो के को लागि जवाफ तयार छ बुझ्न सक्छौं।
एक राउटर के हो? जा राउटर
नोटबुक ठंडा संग खडे तात्दै को समस्या समाधान
AMD A4-5300 - पीसी डेस्कटप लागि बजेट प्रोसेसर: विवरण
सेन्ट ओल्गा शहर बाल अस्पताल। सेन्ट ओल्गा - सेन्ट पीटर्सबर्ग मा बाल अस्पताल नम्बर4को संरक्षक
ओवनमा माछा काली
Multivarka मा रोटी नुस्खा: तयारी चरणमा
व्यापार योजना कार: महत्त्वपूर्ण nuances
GAZ-12 विनिर्देशों र चित्रहरू
"Ceresite CT-16" (प्राइमर): विशेषताहरू, अनुप्रयोग, प्रतिक्रिया
3 वर्ष को बच्चा को लागि उपहार। केटा र केटी जन्मदिन खुसी भन्दा, र मात्र